Tsy mirehareha amin’ny fahendren’izao tontolo izao
"Aoka ny hendry tsy hirehareha amin'ny fahendreny." - Jer. 9:22.
Tsy tokony hifaly amin'ny fahendreny, ny heriny na ny harena ananany ny olombelona, fa amin'ny fahalalana an'i Kristy. lo fahalalana io no tsara indrindra, sarobidy indrindra amin'izay mety ananantsika. Izany no antoky ny fiainana mandrakizay. Satria "izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesôsy Kristy, iray efa nirahinao". Tsy voavidin-bola izany, tsy takatry ny saina, tsy azon'ny fahefana baikoina koa; kanefa omena maimaimpoana ho an'izay manaiky ny handray izany ny fahasoavany be voninahitra. Afaka ny hahatsapa ny filany anefa ny olona, ary hiala amin'ny fitokian-tena rehetra ka handray ny famonjena amin'ny maha-fanomezana azy. Tsy noho ny fahamarinan'ny tenany no hahafahan'ireo izay hiditra ny lanitra hanombana ny rindriny, ary tsy ny fanatitra volamena na volafotsy lafo vidy no hanokatra ny vavahadiny, fa noho ny fahamendrehan'ny hazo fijalian'i Kristy no hahazoan'izy ireo miditra ao amin'ireo fitoerana maro ao amin'ny fonenan'Andriamanitra.
Tsy mahatsapa ny ilany an'i Kristy ireo mpanamarin-tena. Ary raha manidrahindra ny fahendrena sy ny fahatsaran'ny tenany ireo izay milaza ho mitondra ny Anarany, dia ho hita mazava fa tsy manana fifankazarana Aminy izy ireo. Rehefa naseho tamin'ny fanahy iray i Kristy dia ho tsapan'ny mpanota fa ao amin'ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra izay fanavotana noho ny ota no hany fanantenany. Jereo ny akony sy ny vokany rehefa manomboka manokatra ny fitiavany manoloana azy i Kristy. Maro amin'ireo izay mangataka io fanandrarnana io no tsy mahalala ny fitiavan'i Kristy. Raha mitarika ny olona iray handini-tena amim-panetren-tena anefa izany,(...) raha toa ka maneho mazava izy fa ny valisoa any an-danitra dia manana tombambidy be lavitra noho ny fananany eto amin'izao tontolo izao, dia ho fantatsika fa ny taratry ny fiainana avy amin'i Kristy no hamirapiratra eo amin'ny fanahiny.- RH, 15 Martsa 1887.
Hadalana amin'ny endriny rehetra ny fahendren'olombelona raha tsy eo i Kristy; fa ireo izay mitoky amin'ny fahendren'ny tenany dia tsy handova ny fiainana mandrakizay (...) Ny filazantsara no hery sy fahendrena avy amin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino fa i Jesôsy dia afaka ny hamonjy tokoa ireo rehetra mankeo amin'Andriamanitra amin'ny alalany.- Y1, 19 Janoary 1893.